Homeबिबिधपत्याउनुहुन्छ ? पात चुँड्द़ा बिरुवा रु न्छन्- तर कसरी ?
एजेन्सी । हामीले सानो वा ठूलो भइसकेपछि पनि कतिपटक जानी नजानी विरुवा वा रुखबाट पातहरु चुँड्ने गरेका छौं। कतिचोटि त बिरुवा नै मास्ने गरेका छौं।
सानो छँदा बिरुवाबाट पात चुँड्ने क्रममा हामीलाई आमाबुवाले त्यसो गर्नु हुँदैन बिरुवाहरुलाई दुख्छ भन्नु हुन्थ्यो। यो विषयमा तपाई हामीले त्यति ध्यान दिएका थिएनौ होला । तर पात चुँड्दा बिरुवाहरु जोडजोडसँग चिच्याउने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।
तेलअभिव युनिभर्सिटीका अन्वेषकहरूले टमाटर र तम्बाखुको बिरुवामा गरेको एक अध्ययनअनुसार ती बिरुवा वातावरणीय चाप र पर्यावरणका कारण चिच्याउने गरेको पत्ता लगाएका छन्।
उनीहरुले १० मिटरको दूरीमा माइक्रोफोन राखेर सबै गतिविधिलाई रेकर्ड गरेका थिए। अध्ययनका अनुसार जब बिरुवामा बाहिरी चाप, तनाव, प्रेसर बढ्दछ वा कसैले पत्ता चुँड्ने गर्दछन्, तव बिरुवाले २० देखि १०० किलोहर्जको अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सीको ध्वनि उत्सर्जन गर्ने गर्दछन्।
त्यसैगरी, अन्वेषकहरुका अनुसार बिरुवाले आफूलाई परेको पीडा अन्य बोटबिरुवासमेतलाई सुनाउने गर्दछन्। यसलाई प्रमाणित गर्न अन्वेषकहरुले बिरुवामा ३५ स–साना उपकरण जडित गरेका थिए र विरुवाका हरेक गतिविधि अध्ययन गरेका थिए। जसअनुसार, बिरुवाले आफूलाई बाहिरी तत्वबाट परेको पीडालाई अन्य बोटबिरुवालाई भन्ने वा सुनाउने कोसिस गरेको पत्ता लगाएका छन्।
यसैगरी, अध्ययनकै क्रममा जब टमाटर र तम्बाखुको बिरुवालाई पानी नदिई राखियो, तब ती बिरुवाहरुले ३५ किसिमका अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रेस साउन्ड निकालेका थिए।
यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि जब बिरुवाहरुलाई बाहिरी तनाव पर्दछ, तब तिनीहरु जोडजोडले चिच्याउने गर्छन। तर, ती आवाज मानिसको कानले सुन्न भने सक्दैन।
टु टल, प ठाओका या त्रु दैनिक ४५ हजार, आ म्दानी दिनमै तीन हजार